Shiinaha Soosaarayaasha Bamka Dab-demiska Diesel iyo alaableyda | KAIQUAN
XBC taxanaha mashiinka naaftada ee naaftada waa qalab biyo galinta dabka oo ay soo saartey shirkadeena sida ku xusan GB6245-2006 heerka bamka dabka heerka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa nidaamka dabka siinta ee batroolka, warshadaha kiimikada, gaaska dabiiciga ah, warshad koronto, wharf, saldhigga gaaska, keydinta.
XBC taxanaha mashiinka naaftada ee naaftada waa qalab biyo galinta dabka oo ay soo saartey shirkadeena sida ku xusan GB6245-2006 heerka bamka dabka heerka. Waxaa inta badan loo isticmaalaa nidaamka biyaha ee dabka ee batroolka, warshadaha kiimikada, gaaska dabiiciga ah, warshad koronto, wharf, saldhiga gaaska, keydinta, dhismaha dabaqyada dhaadheer iyo warshadaha kale iyo beeraha. Iyada oo loo marayo xarunta qiimeynta u qalmida alaabta dabka (shahaado) waaxda maareynta xaaladaha deg degga ah, badeecaduhu waxay gaareen heerka ugu sarreeya Shiinaha.
Mashiinka Naaska Diesel waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado biyo saafi ah iyada oo aan lahayn walxo adag oo ka hooseeya 80 ℃ ama dareeraha leh sifooyinka jirka iyo kiimikada oo la mid ah biyaha. Shuruudaha la kulanka xaaladaha dabka, xaaladaha shaqada ee biyo gelinta gudaha iyo wax soo saarka waa in la tixgeliyaa. Mashiinka dabka ee naaftada XBC waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya nidaamka madaxabanaan ee dabka si madaxbanaan, laakiin sidoo kale nidaamka guud ee biyo-gelinta ee dabka iyo nolosha, laakiin sidoo kale nidaamka biyo-gelinta ee dhismaha, degmada, warshadaha iyo macdanta, bixinta biyaha iyo bullaacadaha, markab, hawlgal goob iyo munaasabado kale.
- Nooc ballaadhan oo noocyo kala duwan ah: hal marxalad oo keliya oo nuugta bamka laba-cirifoodka ah, mashiinka isku-dhafan ee jiifka ah, mashiinka laba-nuugga ah ee masraxa hal mar ah, mashiinka mashiinka dhaadheer iyo noocyada kale ee mashiinnada ayaa loo xushay qaybta, oo leh qulqulo iyo cadaadis ballaaran.
- hawlgal otomaatig ah: marka qaybta bamka biyaha ay hesho amarka kontoroolka fog, ama cilladda korantada ee korantada, ciladda mashiinka korontada iyo calaamadaha kale (bilowga), cutubku si otomaatig ah ayuu u bilaaban doonaa. Qalabku wuxuu leeyahay xakameynta nidaamka barnaamijka otomaatiga ah, helitaanka xogta otomaatigga ah iyo soo bandhigida, cilad si toos ah u ogaanshaha iyo ilaalinta.
- Soo bandhigida halbeegga geedi socodka: muuji heerka hadda jira iyo xuduudaha qalabka iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah ee shaqada hadda jirta ee qalabka. Muujinta xaaladda waxaa ka mid ah bilowga, hawlgalka, xawaaraha, hoos u dhaca, (shaqo la’aanta, xawaaraha buuxa) xiritaanka, iwm. Xuduudaha habka waxaa ka mid ah xawaaraha, cadaadiska saliidda, heerkulka biyaha, heerkulka saliidda, danab batteriga, waqtiga hawlgalka isugeynta, iwm.
- Alarm function: bilow alaarmiga cillad la'aanta, digniinta cadaadiska saliida oo hooseysa iyo xiritaanka, alaarmiga heerkulka biyaha oo sareeya, alaarmiga heerkulka saliida sare, alaarmiga danab batteriga oo hooseeya, alaarmiga heerka shidaalka oo hooseeya, qaylodhaanta xad dhaafka ah iyo xirida.
- Qaababka kala duwan ee bilowga ah: gacanta laga bilaabo goobta iyo joojinta xakamaynta, bilowga fog iyo joojinta xakamaynta xarunta xakamaynta, bilawga iyo socodsiinta korantada korantada.
- Calaamadda jawaab celinta xaaladda: tilmaamidda hawlgalka, bilowga hawlgabnimada, qaylo-dhaanta dhammaystiran, xakamaynta bixinta korantada iyo noodhadhka calaamadaha jawaab celinta xaaladda kale
- Ku soo dallaca otomaatiga: heeganka caadiga ah, nidaamka xakamaynta ayaa si otomaatig ah u dul sababi doona batariga. Marka mashiinku shaqeynayo, koronto-dhaliye mashiinka naaftada ku shaqeeya ayaa batteriga ka qaadi doona.
- Xawaaraha shaqada ee la hagaajin karo: marka socodka iyo madaxa mashiinka biyaha ay ka soo horjeedaan shuruudaha dhabta ah, xawaaraha lagu qiimeeyay mishiinka naaftada waa la hagaajin karaa.
- Wareegga bilowga batteriga laba-geesoodka ah: markii hal batteri uu ku guuldareysto inuu bilowdo, wuxuu si otomaatig ah ugu wareegayaa bateri kale.
- Batariga bilaashka ah ee dayactirka: looma baahna in si joogto ah loogu daro elektroolka.
- Jaakad biyo kululeeyaha ka hor: cutubku waa sahlan yahay in la bilaabo marka heerkulka deegaanku hooseeyo.
Xawaare: 990/1480/2960 rpm
Baaxadda Awoodda: 10 ~ 800L / S
Baaxadda cadaadiska: 0.2 ~ 2.2Mpa
Cadaadiska jawiga jawiga:> 90kpa
Heerkulka heerkulka: 5 ℃ ~ 40 ℃
Qoyaanka qaraabada ee hawada: ≤ 80%
Hore: Taxanaha XBD Vertical Long dhidibka Dabka saar
Xiga: W Seeries Waa Lagu Cadaadiyay Qalabka Cadaadiska